List of Windows components အပိုင်း (၁) - keywords HERE
Home » window » List of Windows components အပိုင်း (၁)
List of Windows components အပိုင်း (၁)
Microsoft Windows ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးများကို ကွန်ပျူတာကိုစတင်လေ့လာသူများ သိရှိနိုင်အောင်
ကျနော် Wikipedia ဆိုက်ကနေ နားလည်သလောက် ပြန်ပြီးရေးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အများစုကမိမိသုံး
ပြုနေတဲ့ဝင်းဒိုးရဲ့ပါဝင်သောအစိတ်အပိုင်းများ (components) တွေကို မသိကြဘူးလေ။ ဒါကြောင့်
အောက်ပါ မာတိကာများသည် Microsoft Windows ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း (components) တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမာတိကာခေါင်းစည်းအားလုံးကို ကျနော်အားတဲ့အခါတိုင်း တစ်ခုစီရေးပြပါ့မယ်။
(၁)Configuration and maintenance
Configuration and maintenance အပိုင်းသည် အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Control Panel, Administrative tool, Software Installation Development ဆိုပြီး (၃) မျိုးတွေ့နိုင်ပါသည်။
အဲဒီ (၃) မျိုးတွင် Control Panel မှာ….
(၁) Control Panel
(၂) Device Manager
(၃) Window Mobility Center
(၄) Window Security Center
(၁) Control Panel = Control Panel ဆိုတာ ခွင့်ပြုထားတဲ့ user များ basic system setting ၊ hardware ထည့်သွင်းခြင်း၊ software များ add/remove ပြုလုပ်ခြင်း၊ user accountကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ accessibility option များကို ပြောင်းခြင်းစသည် ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Configuration တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Device Manager = Device Manager ဆိုတာ ကွန်ပျူတာကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ hardware တွေကို ပြုပြင်ခြင်း၊ Device Driver အားလုံးအသုံးပြုထားတွေကို ထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့ နေရာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Window Mobility Center = Window Mobility Center ဆိုတာ mobile ကနေတွက် ချက်ပေးလိုက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေရဲ့ ဗဟိုချက်မနေရာဖြစ်ပါတယ်။
(၄) Window Security Center = Window Security Center ဆိုတာ anti virus, Automatic Update, Windows Firewall, အခြားသော operation system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update တွေကို အချက်ပေးတဲ့ ပင်မနေရာဖြစ်ပါတယ်။
(2) Administrative Tools
အောက်ပါ ခေါင်းစဉ်အားလုံးသည် Administrative Tools အပိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့ တွေကို လိုအပ်လို့ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်း Administrative Tools မှာဝင်ရောက်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ် ပါသည်။
2. Windows System Assessment Tool
5. Windows Disk Defragmenter
6. Event Viewer
7. Reliability and Performance Monitor
8. Logical Disk Manager
(1) Microsoft Management Console = Microsoft Management Console ဆိုတာ Wind ow 2000, Window NT အခြေခံထားတဲ့ Operation System တွေဖြစ်ပါတယ်။ System Ad ministrator, advance user များအနေနဲ့ system monitor, system configure များကို လို သလိုပြင်ဆင်လို့ရနိုင်တဲ့နေရာလေးပါပဲ။ (wikipedia မှာ ပုံနဲ့တကွရှင်းပြထားပါတယ်)။
(2) Windows System Assessment Tool = Windows System Assessment Tool ဆိုတာ Windows Experience Index (WEI) လိုမျိုး အချက်အလက်လုပ်ပေးတဲ့ အမျိုးမျိုး သော hardware ရဲ့ performance characteristics, capabilities တွေကို တိုင်းတာပြတဲ့ Window 7, Vista ပုံစံ (module) တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
3. System Restore = System Restore သည် လူတိုင်းသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အသုံးအ ရမ်းတည့်တဲ့ tool တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိဝင်းဒိုးမှာ အသုံးပြုကြာလာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် application program တွေများလာတာကြောင့် error တွေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ပြီး System Restore လုပ်လိုက်ရင် အဲဒါတွေ နဂို restore file လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွား
4. Windows Recovery Environment = Windows Recovery Environment ဒါကတော့ System Restore, backup image အသုံးပြုပြီး မိမိဝင်းဒိုးကို အရင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်ဖို့ restore လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ boot ကနေတက်ပြီး အရေးကြီးတဲ့ error တွေကို recover, diagnose
လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ tool ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကပုံ…
5. Windows Disk Defragmenter = Windows Disk Defragmenter ဆိုတာ optimize computer performance တွေကို စနစ်တကျပြန်စီပေးတဲ့ tool ပါပဲ။
6. Event Viewer = Event Viewer သည် ကွန်ပျူတာရဲ့ system, security နဲ့ပရိုဂရမ်
7. Reliability and Performance Monitor = Reliability and Performance Monitor သည် လက်ရှိ system reliability, performance တွေကို ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်တဲ့နေရာလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်။
8. Logical Disk Manager = Logical Disk Manager ဆိုတာ Device Drives အားလုံး အတိုး၊ အလျှော့ပြုလုပ်နိုင်တဲ့နေရာလေးပါပဲ။
9. Registry Editor = Registry Editor ကတော့ Window Registry တစ်ခုလုံးကို ၀င်ရောက်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ်။
10. Task Scheduler = Task Scheduler သည် ကွန်ပျူတာရဲ့ အချိန်၊ နေ့ရက်တွေကို ညှိပေးတဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ်။